Semalt: 3 Amacandelo okuMisa ukuSiza kunye nokuPhucula ukusebenza kwakho
Kukho iindlela ezininzi abantu abazisebenzisayo ukufumana umxholo wabo uqaphele kwi-intanethi. Kukho abo bakholelwa ukuba indlela ephela yokuba bafumane ukuba abaphulaphuli banakekele ngayo kukuba baphazamise rhoqo. Uninzi lwabagaxekisi banokucinga ngolo hlobo. Bayiboleka oku kubaphi abathengisi nabathengisi asebenzise amashumi eminyaka ngoku - feb peterburi tee 442oons. Baye basebenzisa isandi esaneleyo sokuhlawulwa kwexesha leTV, kunye namaphephancwadi, umntu ekugqibeleni wayeya kuzibona. Isicwangciso sinesiphako esisodwa:
Akukho mntu ufuna ukukhathazeka ngezinto azizange azicelele okanye imilayezo engabalulekanga kubo. Ixabiso elixabisekileyo abantu abanalo kweli hlabathi elixakekileyo lixesha. Nangona kunjalo, kukho iiblogi ezininzi, abalobi kunye nabakhangisi abazama ukuphawula ngokusebenzisa le qhinga lokuphazanyiswa imihla ngemihla. Kuye, indlela kuphela abantu abaya kuphulaphula ukuba baqhubeka bexoxa. Ewe, kukho ubungakanani obuphezulu abayi kuba nako, kwaye ukuba uphakathi kwabo banecebo elinjalo, kufuneka ume. Kuyakucasula kakhulu kuthi sonke.
UMichael Brown, onguchwepheshe ophezulu uSemalt , uqinisekisa ukuba indlela engcono yokuphawula kukuba ukuyeka ukwenza umsindo kunye nokwakha iqonga eliza kubangelwa abantu.
Izinto ezintathu kufuneka uzive
"UkuThengiswa kweMvume," nguSeth Gordon yincwadi exoxa ngezinto ezintathu ezibalulekileyo ukuba wonke umyalezo ofanelekileyo wokufunda kufuneka abe: ukulindela, ukubaluleka, kunye nendlela yokuziphatha. Bonke abathengisi banqwenela ukuba nabaphulaphuli abathunjiweyo. Nangona kunjalo, indlela yodwa yokukwazi ukuba abantu bayathandwa yinto enikwenzayo ukuba ngaba bakuvumela ukuba niyiveze. Yonke into namhlanje isebenza ngemvume. Ngokomzekelo, izinto eziqhelekileyo ezifana nokubhaliselwa kwinkonzo, ukuyalela iipakethi, okanye ukulindela umnye nomntu, zonke zinento oyilindeleyo njengoko uvumele umntu ukuba ahambise umyalezo kuwe.
Ukulindela kubalulekile kuba kubonisa ukuba unomdla kangakanani umyalezo othile. Ukuba abaphulaphuli abanandaba nomxholo walo, akunandaba nokuba kulungile kangakanani. Abo bantu abayi kufuna ukuphulaphula. Okufanayo kuya kwimilayezo ababonayo ingabalulekanga kubo okanye abo abangabandakanyeki kwiqondo labo.
Kufuneka ube yincinci
Ihlabathi namhlanje lijongene nokuncintisana oluninzi kunye nengxolo, kunye nabo bonke abantu abafuna ukuphawula okanye ukuva. Ngoko ke, uthetha ukuba unobungozi obunzima ngokubanzi xa ungakhange ulungiselele umxholo wakho kwi-niche ethile yemarike. Abantu abanomdla "ngokuqhelekileyo" kwakhona. Wonke umntu ufuna into ngaphandle kwesiqhelo, into "eyinqaba"..
Iiblogi, okanye nayiphi na indawo yesikhulumi, ikuvumela ukuba uzalisekise izinto ezintathu ezixutyushwa kule post. Nika abantu indlela yokubhalisa, unikeze umyalezo odibanisayo, kwaye usebenzise isitayela esikhethekileyo.
Abantu kufuneka baqonde ukuba isakhiwo esinjalo sinokufuna ixesha kunye neemvume ezininzi. Kodwa le ngcamango ayinakwenzeka. Ifuna kuphela umzamo omncinane.
Konke malunga nemvume
Nalu uluhlu lwezinyathelo ezine ezilula ongazisebenzisa ukudala isiteshi abantu abanokunyamekela ukuphendulela kuyo kwaye bafaneleke ingqalelo yabo:
1. Melana nesilingo sokuphazamisa. Ezi ziquka naluphi na umzamo wokumemeza, ukukhala, okanye ukucela ukuba uve. Enye indlela ngokusebenzisa i-spam bots ukuthumela ngokuphindaphindiweyo imilayezo yogaxekile nethemba lokuba umsebenzisi unqakraza kwikhonkco enikezelweyo ekhokelela kwikhasi lomthumeli.
2. Qala nento oyaziyo. Naluphi na ukulungeleyo, sebenzisa ukuseka isiseko seqonga, kwaye njengendlela yokwabelana ngolwazi lwakho.
3. Ukubonelela abantu ithuba lokuphulaphula. Kwimeko apho ungenayo enye indawo xa ufumana ingqwalasela yomntu, yenza ngokunyanisekileyo, kunye nenhlonipho enkulu.
4. Vula abaphulaphuli bakho ngento ephawulekayo. Ukuba ufumana ingqalelo, musa ukuchitha loo nto. Bonisa i talente yakho, kwaye ukuba uyakwazi, ukuchasa iimeko kunye nokugqithisa okulindelekileyo.
Yiyo, unako ukhetho lokungazihoxisi ezi ngcebiso kwaye ugxininise izandla zakho emoyeni enethemba lokuba umntu uyazisola. Unokuba ufumane abantu abambalwa bakuqwalasele. Ingxaki kukuba xa bafumana into ephazamisayo ngaphezu kwakho, bayakulibala malunga noko kufuneka unikele.
Khumbula njalo ukuba indlela ophumelela ngayo abaphulaphuli yindlela oya kuyenza ngayo. Ukuba ngaba kukuphazamiseka, kuya kufuneka uphazamise abaphulaphuli ngokukhawuleza ukuba unento yokubonisa, kunye nawe, okanye abaphulaphuli bafuna oko.
Indlela yodwa onokufumana ingqalelo ngokusisigxina kumxholo wakho kukuba uyayifumana. Bonisa, cela imvume, kwaye ukhulule. Zonke ezinye iinkqubo ngoku nje zihlazo kwaye ziya kuhoywa ekugqibeleni.